ဗဟုသုတ | ဇော်မျိုး
ကျွန်တော် G talk အကောင်. လအလွယ်တကူ ဖွင်.လို.၇တဲ. နည်းလမ်းလေး ဖော်ပြပေးချင်တယ်။ အကောင်. တစ်ခု အလွယ်ဖွင်.ဖို.-
အောက်ကအဆင်.အတိုင်း ဆက်လက် ဖြည်.ပေးပါ…
(၁)First Name နဲ. Last Name ကို မြန်မာလိုေ၇းပေးလိုက်ပါ။
(၂)Mobile Phone ဆိုတဲ.နေ၇ာမှာ မြန်မာလို နံပါတ်တွေေ၇းပေးလိုက်ပါ။ (ဥပမာ – +95 ၁၂၃၄၅)
ဒီနှစ်ခု ကို မြန်မာလိုေ၇းပြီး အကောင်.ဖွင်.လိုက်ပါ။ အေးအေးဆေးဆေး အကောင်.တစ်ခု အလွယ်တကူ ဖွင်.လို. ၇ပါလိမ်.မယ်။
ကျန်တဲ.နေ၇ာတွေမှာတော. ပုံမှာ ပြထားတဲ.အတိုင်း ဖြည်.လိုက်ပါ။
ပြီး၇င် Next Step နှိပ်ပြီး G mail ထဲသွားမယ်ဆို၇င် အကောင်. ဆောက်တာ ပြီးဆုံးသွားပါပြီ…
Filed under ဗဟုသုတ Tagged with G talk
ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာနဲ. ပက်သက်တဲ. စာအုပ်တွေတင်ထားတဲ. ၀က်ဆိုဒ်တစ်ခု ပြောပြ ချင်ပါတယ်။ မြန်မာလိုေ၇းထားတဲ. စာအုပ်တော်တော်များများ တင်ထားပေးတယ်။ စာအုပ်ပေါင်း ၅၀ ကျော် ၇၀ လောက်ရှိမယ် ထင်တယ်။ ဒေါင်းနည်းလေး ပြောပြချင်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး http://keekee.minus.com ဒီလင်.ကိုနိပ်ပြီးသွားလိုက်ပါ။ေ၇ာက်၇င် ကိုယ်ကြိုက်တဲ. စာအုပ်ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ပုံထဲက အတိုင်းအနီဝိုင်းပြထားတဲ.လင်.လေးနှိပ်ပြီး ဒေါင်းလို.၇ပါပြီ။
Filed under ဗဟုသုတ Tagged with internet
Online မှာ Website လိပ်စာတွေ ဘယ်လိုမှတ်ထားမလဲ…
ကျွန်တော် အခု Website လိပ်စာလေးတွေ အလွယ်တကူ မှတ်ထားလို. ၇တဲ. ဆိုဒ်လေးတစ်ခုနဲ. မိတ်ဆဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီ Website လုပ်ဆောင်နိုင်တာကတော့ မိမိ မှတ်သားထားချင်တဲ့ Website ရဲ့ URL ကို အကြောင်းအရာ ၊ ခေါင်းစဉ် ဖြင့် မိမိစိတ်ကြိုက် Folder များဆောက်ကာ သိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို. ဘယ်သွားသွား Website လိပ်စာတွေ မှတ်ဖို. အတွက် စာအုပ်တွေ ယူသွားစ၇ာ မလိုတော.ဘူးပေါ.ဗျာ။ အင်တာနက်၇ှိတဲ.နေ၇ာဘယ် ဘယ်သွား website လိပ်စာလေးနဲ. အကောင်.ကို မှတ်ထား၇င် အဆင်ပြေပြီဗျာ။ ကဲကျွန်တော်တို. မိမိသိမ်းထားလိုတဲ့ Website လိပ်စာ တွေကို အလွယ်တစ်ကူ သိမ်းဆည်း မှတ်သားထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့
ကိုယ်ကြိုက်တဲ. pdf ဖိုင်များကို (pdf)ဖိုင်တစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်ပေါင်းမယ်…